Al-Shabaab oo wadada u galay Kolonyo Ciidamada Itoobiya la socdeen agagaarka Garoonka Balli-Doogle – STAR FM SOMALIA
Dagaal u dhaxeeyay Al-Shabaab iyo Ciidamada Itoobiya ee ka tirsan howl galka AMISOM ayaa ka dhacay inta u dhaxeysa deegaanka Leego iyo Garoonka Diyaaradaha Balli-Doogle ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Sida ay sheegayaan wararka dagaalkan ayaa ka dambeeyay markii dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ay wadada u galeen Kolonyada ay la socdeen Ciidamada Itoobiya oo ka yimid dhinaca Balli-Doogle.
Warar lagu qoray baraha Internet-ka ee taageera Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in Ciidamada Itoobiya ay ka gubeen afar ka mid ah gaadiidka ay wateen, ayna ku xayiran deegaanka uu weerarka ku qabsaday.
Dadka deegaanka Leego ayaa sheegaya inay maqlayeen hubka cul culus oo la is weydaarsanayo, lamana oga khasaaraha rasmiga ah ee dagaalka labada dhinac ka soo gaaray.
Ma jirto war ka soo baxay AMISOM oo ku aadan dagaalka iyo sheegashada ka soo yeertay Al-Shabaab oo ah inay afar gaadiid ka gubeen Ciidanka AMISOM ee Itoobiya ka socda.
Al-Shabaab ayaa muddooyinkii u dambeeyay kordhisay weerarada ay ku qaadayeen saldhigyada Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, iyadoo 15-kii bishii hore ay aheyd markii Al-Shabaab weerar askar badan looga dilay Ciidamada Kenya ku qaaday deegaanka Ceel-Cadde ee Gobolka Gedo.